थरीथरीका कृषिमन्त्रीः हरि पराजुलीको यस्तो छ, असार १५ अनुभव « Pahilo News
थरीथरीका कृषिमन्त्रीः हरि पराजुलीको यस्तो छ, असार १५ अनुभव
प्रकाशित मिति : 29 June, 2016 12:09 pm
१५ असार । नेपाल कृषि प्रधान देश । यहाँका अधिकांश जनता अहिले पनि कृषिमा नै आधारित छन् ।
त्यसकारण पनि नेपालमा कृषिको फरक खालको महत्व रहिआएको छ । अझ असार पन्ध्र भनेपछि त्यसको गरिमा र महत्व नेपाल र नेपालीका लागि छुट्टै खालको छ । ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’ महिनाका रुपमा पनि असारलाई लिने गरिन्छ । त्यहि भएर असारको मध्य अर्थात असार १५ मा दही चिउरा खाने, देशका विशिष्ट व्यक्तिले पनि त्यो दिन हिलोमा छिर्नै पर्ने परम्परा चल्दै आएको छ ।
असार पन्ध्रपछि सबै किसानका वारीमा धानको विऊ उर्मिने, वर्षा सुरु हुने र रोपाईंका लागि योग्य हुने भएकाले त्यो दिन उपत्यका र बाहिर पनि धान दिवस, रोपाईं दिवस आदिका नामले सम्झना गर्ने चलन छ ।
रोपाईं दिवसका दिन कृषिमन्त्रालय र कृषिसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुले पनि फरक–फरक ढंगले धुमधामसँग यो पर्व मनाउने चलन छ । यो दिन सकेसम्म कृषिमन्त्रीलाई नै खेतका गरामा लगेर धान रोपाउने र रमाइलो गर्ने चलन पनि छ ।
उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोपाइँ गरी आज १३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएयो । ‘व्यावसायिक धानखेतीको आधार, सामुदायिक नर्सरीको विस्तार’ नाराका साथ खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन भातबाहेक अन्य खाद्यान्नलाई पनि खानाका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाउँदै मन्त्रालयले यो दिवस मनायो ।
पछिल्ला वर्ष भने धान दिवसको भन्दा पनि कृषिमन्त्रीहरुको बढी चर्चा हुन थालेको छ । धान दिवसका दिन काठमाडौंको मूलपानीमा भएको रोपाइँका क्रममा अघिल्लो वर्ष तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले देखाएको हर्कतले गर्दा उनले राजीनामा नै दिनुपर्ने बाध्यता भयो ।
हिलाम्मे ह्याट लगाएर महिलालाई अंगालो हालेको तस्वीर जब सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइलर’ बन्यो त्यहि तस्वीर तत्कालीन मन्त्री पराजुलीको मन्त्री पद खुस्काउने बलियो हतियार बन्यो ।
कृषि विभागले धान दिवसको अबसरमा काठमाडौंको मुलपानीमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । विभागले नै आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्रीलाई निम्ता गर्नु स्वाभाविक थियो । मन्त्रीलाई त्यहाँ बिहान ११ बजे उद्घाटनका लागि निम्ता पनि भयो ।
तर, मन्त्री पराजुली ३ बजे पुगे । निकै रौसिला मन्त्री पराजुलीले त्यहाँ करिब १५ मिनेट भाषण ठोके अनि सुरु भयो उनको रापाईं जात्रा । मन्त्री हिलो खेतमा पसे र कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूलार्इ जबरजस्ती अंगालो हाल्न थाले ।
कतिसम्म भने मन्त्री पराजुलीले अगाडि जो–जो महिला देखे उनीहरुलाई नै जबरजस्ती अंगालो हाल्न थाले । केहीबेर त मन्त्रीको रमाईलो महिलाहरुले सहे । विस्तारै अति भएपछि उनको आलोचना सुरु भयो । रोपाईंमा रमाइृलो गरेर मन्त्री फर्किदैँ गर्दा तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा ‘भाईरल’ भैसकेका थिए । पछि उनको त्यहि तस्वीर काण्ड जीवनभरी घोचिरहने तुस बनेर बस्यो ।
पूर्वमन्त्री पराजुलीले त्यो तुस असार १५ कै दिन अर्थात आज पनि पोख्न भ्याए । जब असार १५ आउँछ अनि धेरैले रोपाईं दिवससँगै मन्त्री पराजुलीलाई पनि सम्झिन्छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि विभिन्न खालका व्याङग्यसहित उनको आलोचना सुरु हुन्छ ।
पहिलो न्युजका सम्बाददाताले हरेक असार १५ मा किन उहाँको आलोचना हुन्छ ? मन्त्री पराजुलीको असार १५ अनुभव कस्तो छ ? यसबारेमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनले सबै गल्ती फोन गर्ने सम्बाददाताले नै गरेको हो झैँ गरी पड्किए । ‘म अहिले पोखरमा वातावरणसम्वन्धि महत्वपूर्ण गोष्ठीमा छु,’ उनले चर्को स्वरमा भने, ‘तपाईंका कोही फुर्सदिला सम्बाददाता छन् भने यहाँ समाचार संकलन गर्न पठाउनु, महत्वपूर्ण कार्यक्रम छ, होइन भने नानाभाँती कुरा नगर्नु ।’
उनले पत्रकारहरु सबै ठग भएको समेत प्रतिक्रिया दिए । ‘नानाथरी कुरा लेखेर पैसा कमाउन पल्केका पत्रकारसँग के कुरा गर्नु,’ उनले भने, ‘मेरो केही भन्नुछैन । मेरो बारेमा अझै नकारात्क कुरा लेखेर अझै पैसा कमाउनु, ।’ उनले त्यति भनेर फोन काटिदिए ।
कम छैनन् हरिबोल पनि
वर्तमान कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको पनि अहिले निकै आलोचना हुने गरेको छ । कहिले चलचित्र हेरेर त्यहाँका दृष्यका बारेमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै क्वाँक्वाँ रोएरको सन्दर्भ होस वा रोपाईं दिवसका दिन गलैँचामाथि राखेको गमलामा धान रोपेरको सन्दर्भमै किन नहोस् ।
वर्तमान कृषिमन्त्री गजुरेलले यो वर्षको धान रोपार्इंं पूर्व कृषिमन्त्रीको भन्दा फरक ढंगले मनाएका छन् । उनले गलैँचामाथि राखेको गमलामा धान रोपेका छन् । नजिकै पुसुपंक्षी मन्त्री शान्ता मानवी पनि देखिएकी छिन् । यो दृष्य पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनेको छ ।